Xcode 8: ny API manatsotra sy mampivondrona ny fivoaran'ny fampiharana | Avy amin'ny mac aho
Ny vaovao asehon'i Apple amin'ity WWDC be loatra 2016 Gaga izy ireo ny mpampiasa sy ny mpamorona rehetra izay efa manantena ny fanavaozana hahafahany manomboka manadihady amin'ireo tontolo vaovao ireo.
Araka ny efa nampoizina, aorian'ny fampisehoana ireo vaovao iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 ary tvOS 10, Apple koa dia nanolotra a API nohavaozina miaraka amin'ny fahafaha-manao bebe kokoa sy fanatsarana fitaovana: Xcode 8 dia misy izao ho alaina avy ao amin'ny tranokala ofisialy ho an'ny mpamorona avy amin'ny Apple.
Ity kinova vaovao an'ny fampiharana ity, Xcode 8, izay hamela anao hamorona kaody mifanaraka amin'ny sehatra Apple rehetra, mampanantena fanatsarana lehibe amin'ny lafiny hafainganana famonoana ary misy fanitarana manokana izay hamela ampanjifaina faran'izay betsaka traikefa amin'ny kaody, fanairana mandritra ny fotoana fohy mamantatra lesoka ary a mpanamarina fahatsiarovana vaovao.
Apple dia nihaino ny fangatahan'ny mpandraharaha nangataka a tontolo tsotra mba encode amin'ny fitaovana maro. Amin'ny Xcode 8 dia azo atao ny manamboatra fitaovana marobe hizaha toetra ny kinova voavolavola miaraka a fanamarinana tsotra. Amin'ny maha-zava-baovao farany sy mahatalanjona azy dia afaka mankafy ny fampidirana tanteraka ny teny Swift ireo mpandrindra.
Interface tsara nohavaozina haingana kokoa amin'ny Xcode 8
Ny interface API dia nohavaozina tanteraka hahazoana fahombiazana, hafainganam-pandeha ary fanaraha-maso ny safidy. Ao amin'ny Xcode 8 dia azo atao ny manao a topi-maso azo antoka ary marin-toerana ny fampiharana satria izy io dia hisolo tena ny fitaovana Apple, ary hanao fanovana eo anelanelan'ny fitaovana ho manatsara ny fanaingoana ny interface tsirairay mampiseho ny valiny farany.
ny fanitarana vaovao tafiditra ao amin'ny Xcode 8 ho an'ny mpamoaka kaody loharano mamela anao hanaingo ny traikefa amin'ny kaody ary manendry fitambaran-kitendry ho an'ny asa iraisana. Ankoatr'izay, Xcode 8 dia misy modely vaovao mamela ny mpamorona mamorona fanitarana fanovana ary zarao amin'ny Mac App Store na sonia ny rindranasao soa aman-tsara miaraka amin'ny ID mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple mandefa Xcode8 amin'ny rafitra fiasa vaovao ary manamora ny asan'ny mpamorona